Portable Photoshop CS3 ( latest version ) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Web Development Section -2» Photoshop » Softwares များ
Portable Photoshop CS3 ( latest version )
04-07-2007, 03:14 AM
မြန်မာက မင်ဘာတွေ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် ဆော့ဝဲတွေကို ဒီအတိုင်း အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းလုဒ်ချဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ဒီအတွက် သုံးစွဲရတာလည်း လွယ်ကူ ၊ မြန်မာက မင်ဘာတွေလည်း နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဝဲတွေ သုံးနိုင်အောင် ကျနော် အကြံထုတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ ခုတော့ လက်တွေ့ တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာ။ အဲဒါကတော့ Portable Version တွေပါပဲ။ Portable ဆိုလို့ အစစ်လောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး မထင်ကြပါနဲ့။ သူတို့က မမြင်ရတဲ့ processing တွေကို command prompt မှာ သွားအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာတာပါ။ ဒီအတွက် မျက်စိအမြင်မှာ မီဂါဘိုက် နည်းတဲ့ ဆော့ဝဲကြီးတွေဟာ command prompt မှာ မီဂါဘိုက်အများကြီး အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး အလုပ်တွေလုပ်ပေးပါတယ်။ တကယ်ကောင်းတဲ့ စနစ်လေးပါပဲ။ ပြီးတော့ အားလုံးသော portable version များဟာ C:\_Programs Files စတဲ့ နေရာတွေမှာ သွားရောက်နေရာယူတာ မဟုတ်ပဲ အဲဒီ့ portable application ရှိတဲ့ drive ကနေသာ ယူအလုပ်လုပ်တာမျိုးပါ။ ဒီအတွက် ၀င်းဒိုးမှာ RAM သုံးစွဲမှု လွန်စွာသက်သာပါတယ်။ ကျနော့်စက်ဆို ခုဆိုရင် Portable Version တွေကိုပဲသုံးနေတာပါ။ လွန်စွာ အဆင်ပြေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နောင်ကို မြန်မာကပါ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လို့ရတဲ့ ဆိုဒ်တွေက တင်ပေးပါမယ်။
ကဲ အခုပထမဆုံး Adobe Photoshop CS3 ကို စတင်မိတ်ဆက်ပါမယ်။ သူက စက်ပေါ်မှာ တင်မယ်ဆိုရင် hard disk နေရာ 300 Mb နီးပါးနေရာယူပါမယ်။ အခုဟာလေးကတော့ 48 Mb လောက်ပဲရှိတာမို့ ဒေါင်းလုဒ်ချလို့လည်း အဆင်ပြေ ၊ သုံးစွဲရတာလည်း သိပ်ကိုကောင်းမှာပါ။
Download link : [ 47.9 Mb ]
Last edited by tu tu; 12-10-2009 at 01:14 PM.. Reason: လင့်ခ်ဖြည့်ရန်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
04-07-2007, 05:41 AM
ပို့စ် 164 ခုအတွက် 723 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Re: Portable Photoshop CS3 ( latest version )
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရေ ...
ဒီဟာလေးတွေ အကြောင်းကြားဖူးနေတာ ကြာပြီဗျာ ...
Memory Stick လေးတွေနဲ့ လည်းထည့်ယူသွားပြီး အလုပ်လုပ်လို့ရတယ်လို့လည်း ဖတ်ဖူးတယ် ..
Office အတွက်လည်းရှိတယ်နဲ့ တူတယ်နော် ...
လောလောဆယ်တော့ အကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Adobe Photoshop CS3 ကို ဆွဲချလိုက်ပြီး
Install လုပ်ကြည့်တယ် နည်းနည်းပါးပါး ကလိကြည့်တယ် .... OK တယ်ခင်ဗျ ...
နောက်ဆို ခရီးသွားတဲ့ အခါ 1GB Memory Stick လေးနှစ်ချောင်းလောက်နဲ့ လိမ့်လို့ရပြီပေါ့ဗျာ ... ပျော်စရာကြီး ....
[URL="http://www.sharingtofrds.blogspot.com"]B peaceful & happy all the moments.[/URL]
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ . .
Visit everlearner's homepage!
Find More Posts by everlearner
21-08-2007, 08:01 PM
ပို့စ် 397 ခုအတွက် 5,034 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by pole1star1
ဘယ်နားမှာမ ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ရတယ်လို့မရေးထားလို့
အီးမေးကတော့ pole1star@gmail.com ကို ပို့ပေးလည်းရပါတယ်
ညီလေးရဲ့...... http://mihd.net/v513jc ဆိုတာ ဒေါင်းလုဒ် ချရမယ့် လင့်ပေါ့ကွ။ အဲဒါကို နှိပ်ပေါ့။
Ye Naung ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Visit Ye Naung's homepage!
Find More Posts by Ye Naung
21-08-2007, 08:21 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Aug 2007
ပို့စ် 48 ခုအတွက် 153 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အဲ့ဒီweb page မှာဘယ်နားကနေပြီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါ..
Visit ကြယ်စင်မင်း's homepage!
Find More Posts by ကြယ်စင်မင်း
21-08-2007, 08:41 PM
ပို့စ် 153 ခုအတွက် 544 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
pole1star ရေ အဲဒီလင့်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ MihD.net လင့်ကျလာလိမ့်မယ်...
ပြီးရင် ဘယ်ဘက်က Request Download Link ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်လေ ...
Above is your download link.
Your download ticket will auto-expire in2hours.
You can useadownload accelerator.
World's most generous filehosting service
with no artificial limits!
Our load balanced cluster of linux dedicated servers allows to offer the following services absolutely free to our users:
* Resumable downloads!
* Download accelerators are allowed.
* No daily / hourly download limitations.
* We do not block users by country or ip.
* Split archives are allowed! (and encouraged)
* No waiting foradownload to start (no timers, countdowns etc)
* Our users dont have to install anything to download their files (no toolbars, spyware etc)
အဲဒါပေါ်လာလိမ့်မယ် ... အပေါ်ဆုံးက ..
Download File ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် တင်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို မိမိ PC မှာ
တင်ထားတဲ့ downloading software တစ်ခုခု သို့မဟုတ် window က
download ချပါလိမ့်မယ် ... ပြန်ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါအုံး ဗျာ ...
ဒီတစ်ခါတော့ ရမယ်ထင်ပါတယ် ...
Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear. Keep the faith and drop the fear.
Find More Posts by KZaw
14-03-2008, 11:33 PM
ပြန်စာ - Portable Photoshop CS3 ( latest version )
လာလည်ကြပါဦး သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. [URL="http://kingofstar7.com"][COLOR="Blue"]ကြယ်စင်မင်း ရဲ့ မှတ်စုများ[/COLOR] [/URL]အိမ်အသစ်ဆီသွားကြပါစို့.. ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ...:27:
15-03-2008, 02:01 AM
ပို့စ် 87 ခုအတွက် 409 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးပြီ ။ photoshop icon ကို click လုပ်တော့ ၀င်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတယ်။ choose option below : 1.Setup photoshop 2. Cleanup photoshop 3. Backup preference 4.Restore preference C. compress photoshop file (UPX) D. Decompress photoshop file (UPX) E. Exit ဆိုပြီး Prompt ပေါ်နေတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ။
[COLOR="Blue"][B]Understand the reality and Do The Best ![/B][/COLOR]
Visit wahgyi's homepage!
Find More Posts by wahgyi
15-03-2008, 02:45 AM
1 လို့ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ ပြီးရင် any key ကိုရိုက်။ E ကိုရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။
ဒီမှာတော့ desktop ပေါ်တက်လာတဲ့ photoshop icon ကို double click ပြီးရင်သုံးလို့ ရနေပြီပဲ။
Last edited by tu tu; 15-03-2008 at 03:00 AM..
15-03-2008, 03:12 AM
desktop ပေါ်တက်လာတဲ့ photoshop icon ကို double click ပြီးရင် auto ပြန်ထွက်သွားတယ်။ ကယ်ကြပါအုံး
15-03-2008, 11:51 AM
ပို့စ် 67 ခုအတွက် 123 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by wahgyi
အကို ဗီစတာ သုံးတာလား ? ဗီစတာ သုံးရင်တော့ အိုင်ကွန်ပေါ်မှာ Double click ကို နှိပ်ပြီး Run as Adiministrastor ဆိုတာ ကို နှိ်ပ်ကြည့်ပါလား။
Find More Posts by ညီခဝေ
15-03-2008, 01:14 PM
ok သွားပြီ အချိန်ပေးပြီး ကူညီပေးကြတဲ့ tu tu နဲ့ ကိုညီခဝေ တို့ အား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
26-02-2009, 10:21 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Feb 2009
ပို့စ်2ခုအတွက်5ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒေါင်းလိုက်ပြီဗျာ ...
Find More Posts by aung.123a
အကိုရေ ကျေးဇူးပါပဲ ။ ကျွန်တော်လိုချင်တာလေးရလိုက်လို့ ။ ဒေါင်းသွားပြီနော်။ ရှဲရှဲနီ။
Find More Posts by kaunglay353
ပို့စ်6ခုအတွက် 12 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
photoshop နဲ့ ပက်သက်တဲ့စာအုပ်လေး(မြန်မာလို) ရှိရင်မျှပေးပါအုံး။ကျွန်တော်က အခုမှ သင်ယူနေလို့ပါ။
အပြင်မှာသင် ဖို့အချိန်မလောက်လို့။ myanmar family က မိသားစုဝင်တွေကိုဘဲ အပူကပ်လိုက်တာ ပါ။
Find More Posts by နွေလယ်ည
11-03-2009, 03:37 PM
Originally Posted by နွေလယ်ည
photoshop နဲ့ ပက်သက်တဲ့စာအုပ်လေး(မြန်မာလို) ရှိရင်မျှပေးပါအုံး။
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရဲလင်းထွန်း, စစ်တွေသားချေ, ဇော်ရဲပိုင်, မေဦးမွန်, bonge, khaing king
16-04-2009, 04:12 PM
Find More Posts by ပန့်ဘွိုင်း
24-06-2009, 03:47 AM
ပို့စ် 261 ခုအတွက် 1,233 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by jit too
အစ်ကိုရေ.. Portable Photoshop CS3 ( latest version ) အသစ်ရှိရင် ပြန်တင်ပေးပါလား။
အခုတင်ထားတဲ့ Portable Photoshop CS3 ( latest version )က virus တွေ ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒေါင်တာ ၅ ခါလောက်ရှိပြီး virus ကိုက်ပြီး ပြန်ပြန်ပြောက်သွားတယ်။ အသစ်ရှိရင် အသစ်တင်ပေးပါနော်။
[COLOR="Purple"][SIZE="4"]ညီအကိုမောင်နမများအားလုံး ကျန်းမာ၊ပျော်ရွှင်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ကျပါစေလို့..အမြဲဆုတောင်းပေးပါတယ်...[/SIZE][/COLOR]
Last edited by tu tu; 24-06-2009 at 06:49 AM.. Reason: edit quote
Find More Posts by မင်းကိုထွေး
24-06-2009, 06:54 AM
Anti Virus ကို disable လုပ်ပြီး ဒေါင်းကြည့်ပါလား။
တချို့ Anti Virus တွေက Virus မဟုတ်လည်း virus လို့ပြောပါတယ်။
အဆင်မပြေရင် အောက်ကလင့်ခ်မှာ ရှိပါသေးတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပူစီလေး, မင်းကိုထွေး, decemberdec, khaing king
03-07-2009, 10:52 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2009
Internet မှာလိုက်ရှာပြီး download လိုက်ချနေတာ မရခဲ့ဘူး။ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီထင်တယ်။ Thank You Very Much...
Find More Posts by ပူစီလေး
ပို့စ်2ခုအတွက်7ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီးလင့်ကို ပြန်ကြည့်ပေးပါလား။ အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လင့် နှစ်ခုလုံးက မရတော့ဘူး။
Find More Posts by YeZawTun
11-10-2009, 10:54 PM
ပို့စ် 922 ခုအတွက် 4,797 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by YeZawTun
ဘယ်ပိုဒ့်ကိုပြောတာလဲ မသိ။ Protable Photoshop CS3 ဆို ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာရနေသေးတယ်။ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦး။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit ဖြိုးယံလေး's homepage!
Find More Posts by ဖြိုးယံလေး
12-10-2009, 08:56 AM
Originally Posted by ဖြိုးယံလေး
ဟုတ်ကဲ့အကို portable photoshop CS3 ကိုပြောတာပါ။ အပေါ်ကဟာကော ပြီးတော့ မသုသု
ထပ်တင်ပေးထားတာပါ မရတော့ဘူး။ ကျွန်တော်သေချာအောင်လို့ သုံး၊ လေးခါလောက် လုပ်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။
အဲဒီမှာ multiupload လင့်ခ်ဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီပို့စ် မှာ လင့်ခ်သေနေတာလည်း ပြန်တင်ပေးပြီးပါပြီ။
ဖြိုးယံလေး, bonge, khaing king, YeZawTun
29-10-2009, 07:08 PM
ကျွန်တော်လဲ လုပ်ကြည့်အုံးမယ် စိတ်ဝင်စားလာပြီ အကူညီလို့ရင်ပေးကြပါအုံးနော် ကိုကို နဲ့ မမ
Find More Posts by ဇင်မင်း
ပို့စ်3ခုအတွက်3ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကောင်းတယ်ဗျာ လိုချင်နေတာ ကြာပေါ့ .။ အကိုတို့တင်ပေးမှပဲ သုံးရတော့ မယ်
Find More Posts by ထင်ပေါ်လေး
11-06-2010, 01:00 AM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jun 2010
ပြန်စာ - Re: Portable Photoshop CS3 ( latest version )
Originally Posted by everlearner
ကျေးဇူးပဲဗျာ ရှာလိုက်ရတဲ့ဆိုဒ်တွေ အခုမှပဲအဆင်ပြေတော့တယ်
Find More Posts by ထိန်ဦးလှိုင်
23-11-2017, 12:46 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Nov 2017
တခုမှမရပါ ကျေးဇူးပြုပြီး မီဒီယာဖိုင်းယားက ဒေါင်းလို့ရမယ့်လင့်ခ်လေးမစကြပါသူငယ်ချင်းတို့ရေ
Find More Posts by ကိုတင်ထက်အောင်
29-12-2017, 08:01 AM
ပို့စ် 1,057 ခုအတွက် 6,025 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ကိုတင်ထက်အောင်
photoshop CS3 ကတော့ ဟောင်းသွားပြီမို့လို့ photoshop CS5 portable ကိုပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
file size = 65MB
install ပုံကိုတော့ လိုရမယ်ရပါ
အောက်ကပုံမှတော့ browse ကို နှိပ်ပေးရမှာပါ
ပြီးရင်တော့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာ (ကျနော်တော့ desktop ပေါ်မှာ folder အသစ်ဖွင်ပြီး ) ရွေးရပါမယ်
ပြီးသွားလို့ run တဲ့အခါ အောက်ကပုံလိုပေါ်လာရင် OK သာ နှိပ်ပေးပါ။
တကယ်လို့ မတက်လာရင် run ပြန်လုပ်ပေးပါ။
ဒါကတော့ ကျနော်တကယ် သုံးလို့ရမရ စမ်းကြည့်တာပါ။
ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ရှင့်.. မ၀င်တာ ကြာပေမဲ့ လိုအပ်လာတိုင်း Myanmar family မှာ လာရှာရင် အဆင်ပြေ သွားတာပါပဲ..
thanks for your sharing again..
NOD 32 Antivirus & ESET Smart Security kothu Applications 81 22-04-2012 10:26 PM
portable software များဖန်တီးခြင်း Zeiya Software များဆိုင်ရာ 19 25-01-2012 11:17 PM
Avast Anti-Virus Softwares Collection ရဲမာန်အောင် Applications 21 05-03-2011 09:12 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 04:09 PM